Shir lagu gorfaynayo dardar gelinta Xisbiyada Puntland oo lagu qabtay Garoowe, – Radio Daljir
Shir lagu gorfaynayo dardar gelinta Xisbiyada Puntland oo lagu qabtay Garoowe,
Nofeembar 15, 2012 11:54 b 0
Garoowe, Nov 15-12, Madaxweynaha dowladda Puntland C/raxmaan Sheikh Maxmed Maxamuud Faroole ayaa maanta daah furey shirweyne ?balaaran oo lagaga hadlayo dar dar galinta nidaamka dimuqraadiyadeed ee Puntland iyo howsha diiwaan galinta ururada siyaasadeed ee ka furmaya Puntland.
Shirkan waxaa ka qaybgalay Aqoon yahano, Culimo, Siyaasiyiin, Waxgarad, Haween iyo Qayabaha kala duwan ee bulshada.
M/weyne Faroole oo khudbad dheer ka jeediyey xarunta shirka ayaa sheegay in xukuumadiisu dhamaystiri doonto nidaamka Dimuqraadiyada Puntland mudada ay xilka hayso, isagoo baaq u diray dadka diidan xisbiyada.
Puntland waxaa ka so dadaal Xukuumaddu ku doonayso hirgelinta nidaamka Xisbiyadda badan kaasoo looga hayaamay nidaamkii Qabiilka oo dadka Puntland wax ku qaybsan jireen, sidoo kale waxaa jira dad iyagu qaba inaysan suurta gal ahayn hirgelinta nidaamkaasi xiligan lagu jiro.
Fanaaninta Waayaha Cusub oo soo saaray hees cusub oo wadani ah (Dhegayso)
Caawa iyo Daljir, Nov 15-2012, Khadar Cawl Ismaaciil _Daljir Buuhoodle